Version 0.7.0 – Ga-eme n'ọdịnihu nke translation interface!
January 12, 2011 site na rịọ 3 Comments
Na-esote isi version ntọhapụ nke Transposh bụ ebe a, na usọrọ oge anyị kere obere vidiyo na (banyere 11 nkeji) . Ewebata ọhụrụ atụmatụ dị ọhụrụ version. Ị bụ karịa nabatara na-ekiri vidio na ghoputa ka ọ na-esote ulo mmuta inwe chọr'inwe maka translation ngwa mgbakwunye update nkiri.
Ihe mbụ ị ga-achọpụta na ọhụrụ version bụ isi update ka onye ọrụ interface, anyị kwukwara otu di na nwunye nke ukwuu ịrịọ atụmatụ iji interface ndị dị otú ahụ dị ka ọzọ / gara aga buttons, enyịme akpaaka translations na-achọta kwuo okwu na-sụgharịrị. Ọzọ na-akpali mma ka anyị na-ahụ kwukwara na ikike nke a sụgharịrị ịhụ mbụ ahịrịokwu dị iche ma ọ bụrụ na asụsụ ọ ama sụgharịrị ka sịrị asụsụ na ojiaka, ya mere anya isi na ị nwere Hebrew blog nke ị sụgharịrị na Bekee, a sụgharịrị nwere ike ịsụgharị gị na saịtị Bekee ọzọ asụsụ, o nwere ike ịdị mfe ikwu ya. Achọrọ m na-ekele Henan nke mbụ na-arịọ maka nke a mma. Ọ bụkwa kwere omume ugbu a iji wepụ translations site n'akụkọ ihe mere eme dialog, nke bụ ntụpụ ụkwụ nke ntụziaka nke na-arụ ọrụ na stricter ichikota na translation mma.
Na interface bụkwa sleeker, na nicer ui na bụkwa localizable na themable, ị nwere ike ịtọ isiokwu ke wijetị ntọala, na ezigbo ebe na-adịgide otú ọ ga-ele anya bụ themeroller. Ọ bụrụ na ị chọrọ inyere anyị aka site na-asụgharị interface gị asụsụ ma na-ahụ Ebe E Si Nweta n'ihi na ọ, biko mee ka anyị mara site na iji nweta anyị nhọrọ n'elu.
Ogwe aka agbụrụ bụ ka ọganihu, na Transposh mbụ ngwa mgbakwunye (na anyị maara na nke) ịkwado (n'ezie na-akwado, na-arụ ọrụ nkwado) n'ihi na 60 asụsụ site na-agbakwunye Esperanto support iji Apertium engine, n'ihi na ugbu a, ọ na-arụ ọrụ nke Bekee na Spanish blọọgụ, ma ga-itinyekwu asụsụ n'elu ina.
Ọtụtụ ndị ọzọ ofu na-gụnyere, nchekwa data mmelite, ogologo achụso meta igodo translation, ọzọ – na-emechi ~ 15 tiketi anyị trac.
Ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ – nke Ebe E Si Nweta nke nsụgharị a tọhapụ-aga: Amir ya nsụgharị Hibru na Ignacio n'ihi na Spanish translation, ekele okorobịa!
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: 0.7, apertium ntụgharị, obere, ọzọ asụsụ, tọhapụ, themeroller, UI, video